Free online ọrụ. Columnar na ikpo ntọala
Ngụkọta oge nke ihe pie ntọala
Ezipụta ụdị nke na kọlụm
ụdị 1 ụdị 2
ụdị 3 ụdị 4
Ezipụta akụkụ nke ogidi nke ntọala
Elu nke isi A
The elu nke na kọlụm H
Mkwado mkpara ke ikpehe ke ikpehe ARM1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ezipụta akụkụ nke ntọala
Number ogidi X1
Number ogidi Y1
Ogidi n'okpuru ụlọ ahụ dum S
Ezipụta akụkụ nke grillage
Number nke e nyere ahịrị nke fixtures ARM2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dayameta nke valvụ ARMD
Ciment kwa cubic mita nke ihe
ciment (n'ihi na a akpa nke 50 pound)
Oyiyi akwa (1 ton)
Họrọ ụdị nke ntọala ikpo
Nke a pụrụ ịbụ osisi na gburugburu ma ọ bụ akụkụ anọ isi. Na gburugburu ma ọ bụ akụkụ anọ isi akụkụ.
B - The obosara ma ọ bụ n'obosara.
H - The elu nke isi.
A - The elu nke kọlụm. Ọ bụrụ na ikpo-enweghị ihe mere, mgbe ahụ na-adịghị dee size.
D - The obosara ma ọ bụ dayameta nke isi.
D1 - Na ogologo nke akụkụ anọ isi.
B1 - Obosara maka a akụkụ anọ ogidi.
Mgbe okirikiri cross-ngalaba, ndị a akụkụ ndị na-emetụtaghị na ngụkọta oge.
Akụkụ pie ntọala
X - Obosara nke ntọala.
Y - Na ogologo nke ntọala.
X1 - Number ogidi ndị dị obosara, gụnyere ogidi nkuku.
Y1 - Number ogidi ndị ahụ n'ogologo, gụnyere na nkuku nke ogidi ndị ahụ.
S - Ọ bụrụ na a chịkwaghị ya, a ga-gbakọọ ogidi, mere ndokwa evenly n'okpuru ụlọ ahụ dum. Ọ bụrụ na, na na perimeta ogwe osisi na ntọala.
E - Obosara nke grillage.
F - The elu nke ikpo okpu.
Ọ bụrụ na ngụkọta oge nke monolithic grillage adịghị mkpa, adịghị ezipụta ndị a akụkụ.
ARM1 - Number nke mkwado Ogwe ke otu kọlụm.
ARM2 - Number nke e nyere ahịrị na Ribbon grillage oyiyi akwa.
ARMD - Dayameta nke valvụ. Always gosiri na millimeters.
Ọ bụrụ na ndị mkwado bụ chọrọ, setịpụrụ ụkpụrụ ke 0.
Ezipụta nke ukwu ciment maka rụpụta nke otu cubic mita nke ihe. Na kilograms.
Họrọ n'ike-n'ike n'ihi na ihe mmepụta, site na ibu ibu. Ndị a data dị iche iche na nke ọ bụla.
Ha na-adabere na ụdị nke ciment, anuahade nkume nha na-ewu ụlọ technology. Ezipụta ha suppliers nke ụlọ ihe.
Gbakọọ na-eme atụmatụ na-eri nke ewu ihe, dee ha ahịa.
N'ihi ya, usoro ihe omume ga na-akpaghị aka gbakọọ:
The anya n'etiti ntọala ikpo ha na ọnụ ọgụgụ.
Ihe olu n'ihi na a kọlụm, iche iche n'ihi na elu na ala.
Ọnụ ego nke ihe maka ikpo okpu.
The ogologo na ibu ibu nke chọrọ ibu nke mkwado.
Ndị na-eri na-ewu ihe maka ngwaọrụ monolithic columnar ma ọ bụ ikpo ntọala na a rafti.
Drawings ga-enye a n'ozuzu echiche ma na-ga-enyere ke imewe nke ikpo ntọala.
N'ihi na baths na ụlọ na-enweghị basements, ebe obibi na ìhè mgbidi na ụlọ nke Adobe, ebe itinye a warara ntọala bụghị ego, na-eji pie ntọala. Ya ngụkọta oge ndibiat agwụ, ma na anyị na omume atụmatụ agaghị ukwuu nke oge gị. Niile ị chọrọ ime bụ jupụta na kwesịrị ekwesị ubi dị ka ntụziaka, ị ga-enweta ihe ọmụma banyere achọrọ maka ewu ihe, chọta ha na ọnụ ọgụgụ na ngụkọta na-eri.
Brief nkọwa nke
Chrizaan ntọala nwere n'ụdị ogidi, nke na-achọkwa na-eji a grillage. Ndị a ogwe osisi na-emi odude ke nkuku nke ga-eme n'ọdịnihu Ọdịdị, nakwa dị ka na nrutu nke mgbidi, n'okpuru ebu ma ọ bụ nanị arọ mgbidi, ibé na oké egwu owuwu. N'oge ndị ebe ibu bụ karịsịa elu. Grillage mbo mbuli pie ntọala, na nwere echiche mesikwuru akwa n'etiti ogidi.
Ebe ọ bụ na adịghị mkpa itinye pie ntọala
Tee pie ntọala na-adịghị na-atụ aro ebe e nwere ibughari ma ọ bụ na-adịghị ike Ona dị ka peat ma ọ bụ mmiri na-jupụta ụrọ Ona. Ọ dịghị mkpa itinye ntọala nke ụdị na ebe e nwere a nkọ elu mgbanwe.
Chrizaan ntọala nwere ọtụtụ uru na-eme ka ya na ezigbo ngwọta na-ewu a n'ụlọ mmadụ. Ọ bụ dị ọnụ ala karịa teepu ma ọ bụ slab ntọala, ọzọ echekwa oriri nke ụlọ ihe na-eri nke ya na-ewu, na-enye na-erughị shrinkage na-ebelata ngụkọta nke ebe Re. Nke a na-ntọala irè na-eguzogide ọdachi nke na-ntu oyi Ìgwè nke ala.
Dabere na arọ na ọnụ ọgụgụ nke storeys House ga-ahọrọ na ihe na-eme ka ntọala. Nke a nkume, Adobe, ihe na mesikwuru ihe. Dị ka ụdị ihe a na họọrọ na nke kacha nta size nke obe ngalaba ogidi. Ya mere, n'ihi na ihe posts ngalaba size ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 400 mm maka Masonry erughị 600 mm maka Masonry 380 mm ma ọ bụrụ na ọ bụ n'elu ala larịị na 250 na mm, ọ bụrụ na nkà na ụzụ na-eji ejiji Zabirko.
Tupu ịmalite ụlọ, i kwesịrị ịchọpụta omimi nke ala kefriza, ụdị na mejupụtara nke ala, nke mere na, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na-eme ndokwa dochie ya, na ọnọdụ nke ala dị larịị na-mata mkpa maka drainage na waterproofing. Ewu nke pie ntọala-ewe ebe 9 nọchiri nkebi.
1. Preparatory ọrụ na-anọchite anya ọcha owuwu ahụ dị.
2. Akara na ntọala ahụ, mgbe ala a na-akara dị ka oru ngo.
3. Igwu Ala oghere.
4. Formwork maka ogidi ndị ahụ.
6. Wet ogidi.
7. N'ichepụta nke grillage.
8. Ịrụ nke a na-akpọ Zabirko nsu ma ọ bụ mgbidi n'etiti ogidi.
9. Jikoro maka waterproofing Re.
Dị mkpa isi
Ọ bụrụ na ụlọ a na-wuru na Ìgwè Ona, ọ gaghị ekwe omume na-eyigharị ndị na-ewu malitere. Ọ bụrụ na-ekpe oghere ntọala maka oyi, o nwere ike deform.
Dị nnọọ uploaded na nkwado nke ihe kwesịrị idozi n'ime ụbọchị 30. Mgbe oge a, itinye ha na-adịghị na-atụ aro.
N'ihi na rụpụta nke ihe optimally adabara ciment nke akara M400, na ka na-ejuputa obere gravel na Ntụ ájá.